Banyere Anyị - Jiangsu Garfield International Trade Co., Ltd.
Ọnye na-bụ Weipu Electric?
Tọrọ ntọala na 1996, WEIPU etinyela aka na ntinye nke njikọ okirikiri. Site na-arụsi ọrụ ike na cumulated ahụmahụ, anyị toro to a na-eduga ụlọ ọrụ na okirikiri njikọta Industury na China.
Anyị ngwaahịa na-ọtụtụ-eji dị iche iche machineries, equipments, nkwukọrịta, lightings, ụgbọ oloko, marines wdg
Taa ị nwere ike ịchọta njikọ WEIPU na ngwaahịa dị iche iche n'ụwa niile.
Kedu ihe eletrik Weipu na-eme?
WEIPU nwere ọtụtụ ngwaahịa dị iche iche, site na 3A-200A, ule nyocha site na 1000V-3000V, site na 2pin ruo 61pin, site na IP44-IP68, usoro anyị dịgasị iche nwere ike izute ọtụtụ ihe dị iche iche chọrọ na ngwa, anyị nwere ahụmịhe na mma na mpụga na njikọta mmiri.
Na ike anyị R & D ike, anyị nwere ike ịzụlite dị iche iche okirikiri njikọta dị ka ndị ahịa chọrọ.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Weipu Electric?
Elu àgwà bụ mgbe kacha mkpa, anyị nwere otu ìgwè nke ahụmahụ R&D ọkachamara, ukwuu ruru eru na-arụ ọrụ ike, ruo ụbọchị machineries na n'ụzọ zuru ezu onwem na-ụlọ ule lab, anyị mejuputa ISO9001 na mmepụta na anyị nwere nchọpụta Kemịkalụ na anyị ngwaahịa na technology.
Na ahịa afọ ojuju dị ka isi, na-enyere ndị ahịa na-enye ndị kasị kpọmkwem nkwurịta okwu na-adaba adaba, ngwa ngwa na ọnụ logistics. Ndi oru oru na ndi ahia di elu na-ekwenye na izi ezi nke inweta nkwukọrịta na nkwukọrịta, na-edozi nsogbu gị dị iche iche n’oge ọ bụla.
Nabata Iji Na-arụkọ Ọrụ.
Ekwentị: 86 + 15205203350